10 ဥရောပတွင်သင်ရှောင်သင့်သည့်ခရီးသွားအမှားများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 ဥရောပတွင်သင်ရှောင်သင့်သည့်ခရီးသွားအမှားများ
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 13/11/2020)
သင်သည်ဥရောပသို့သင်၏ပထမဆုံးခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်နေလျှင်, သင်အများဆုံးသိရန်လိုအပ်သည့်အရာအနည်းငယ်ရှိပါသည် လှပသောမြို့ကြီးများ ကမ္ဘာပေါ်မှာ. ကျနော်တို့၏ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြပြီ 10 သင်ဥရောပ၌ရှောင်ရှားသင့်တယ်ခရီးသွားအမှားတွေ. ရဲတိုက်များ၏ပြည်မှခရီးစဉ်, လက်ရာမြောက်သောအစားအစာများ, အမျိုးသားဥယျာဉ်များ, နှင့် သာယာလှပကျေးရွာများ, သငျသညျရပါလိမ့်မယ်အရှိဆုံးအမှတ်ရစရာအားလပ်ရက်များထဲမှဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ထိုဆန့်ကျင်ပေါ်, ၎င်းသည်ဆိုးညစ်သောဒဏ္intoာရီအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးမကောင်းသောအဆုံးသတ်လည်းဖြစ်နိုင်သည်, သင်စနစ်တကျပြင်ဆင်မထားဘူးဆိုရင်.
သင်သည်ဥရောပသို့ပထမဆုံးအကြိမ်ခရီးထွက်သည်ဖြစ်စေ၊, ဤအကြံပြုချက်များသည်သင်၏ခရီးကိုအလုံခြုံဆုံးဖြစ်စေလိမ့်မည်, အများဆုံးအဆင်ပြေ, နှင့်ကျိန်းသေမော်ကွန်း.
1. သေးငယ်တဲ့မြို့ကြီးများနှင့် Off-The- Beaten- လမ်းကြောင်းနေရာများသို့မသွားရောက်
ဒါကြောင့်ဥရောပကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးခရီးစဉ်လျှင်, ထို့နောက်သင်ကလူတိုင်းပြောနေသည့်နေရာများသို့ ဦး တည်သွားသည်. သို့သျောလညျး, သင်အထူးဥရောပရှာဖွေတွေ့ရှိချင်လျှင်, ထို့နောက်သေးငယ်တဲ့ကျေးရွာများနှင့်လူသိများသောမြို့များသို့မသွားရောက်ခြင်းသည်ဥရောပတွင်ရှောင်ရှားရန်ခရီးသွားအမှားများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်၏ဥရောပခရီးစဉ်ကိုမမေ့နိုင်ဆုံးအဖြစ်သို့ရောက်ရန်စီစဉ်သင့်သည်.
ဒါပေါ့, အကယ်၍ မင်းကပဲရစ်မြို့၏လမ်းများပေါ်တွင်လှည့်လည်နေသောအခြားသန်းပေါင်းများစွာသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနှင့်အတူတူပင်ဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုလိုလျှင်, မီလန်, နှင့်ပရာ့ဂ်, ထို့နောက်လူအစုအဝေးကိုလိုက်နာပါ. ဒါပေမဲ့, သင်တစ် ဦး စူးစမ်းရှာဖွေသူ၏ဝိညာဉျကိုရှိပါက, နှင့်ရှာဖွေနေ သူတို့အားဝှက်ထားသောကျောက်မျက်, ထိုအခါ ပတ်ပတ်လည်သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်စီစဉ်ပါ ဥရောပရှိသေးငယ်ပြီးထူးခြားသောကျေးရွာများ.
2. ဥရောပတွင်သင်ရှောင်သင့်သည့်ခရီးသွားအမှားများ: အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးမပြု
သင်ကြားသည့်အခါစိတ်ထဲပေါ်လာသည့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာတစ်ခု အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, လူစည်ကားနှင့်ပူဘတ်စ်ကားဖြစ်ပါတယ်, တန်းစီ, နှင့်အသွားအလာ. သို့သျောလညျး, ဥရောပရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ဘတ်စ်ကားများသာမကရထားများနှင့်ရထားများဖြစ်သည်. တချို့ခရီးသွား rather ည့်သည်တွေကကားငှားမယ်, ထို့နောက်အသွားအပြန်, ဒါပေမယ့်ဥရောပမှာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလွန်အဆင်ပြေသည်, အချိန်တိကျ, စျေးပေါ, နှင့်အကြံပြုခဲ့သည်.
သင်သည်ဥရောပ၏အဝေးဆုံးနေရာများသို့အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သည်, အံ့သြဖွယ်သဘာဝသိုက်, ရဲတိုက်, နှင့် ရင္သပ္ရႈေအမြင်ချင်း, ရထားနဲ့. ရထားနဲ့သွားရင်ဥရောပတစ်ခွင်သွားလာရတာပိုကောင်းတယ်, ဒါဟာအကြွင်းမဲ့အာဏာအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံချွေတာဖြစ်ပါတယ်.
ဟုတ်ကဲ့, ဥရောပမြို့ကြီးများ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အဖွံ့ဖြိုးဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးမြို့များဖြစ်သည်. ဒါပေမဲ့, မင်းကလူပဲ, နှင့်ဥရောပ၏အမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်းရှိကမ်းပါးမတ်စောက်ခြင်းနှင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဖြစ်ကြသည်. သငျသညျအတှေ့အကွုံခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, သင်ဆဲအအေးမိနိုင်ပါတယ်, ခြေကျင်းတစ်လှည့်, သို့မဟုတ်သင့်ကင်မရာခိုးယူ.
ဥရောပမှခရီးသွားအာမခံသည်ကျန်းမာရေးနှင့်အခြားခရီးသွားလာခြင်းအတွက်အရေးကြီးသည်. ခရီးသွားအာမခံ ဥရောပ၌မရှိမဖြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်, သင်ထိုကဲ့သို့သောလိုအပ်ချက်အပေါ်မသိမ်းသင့်ပါတယ်. ခရီးသွားအာမခံကိုမရရှိခြင်းသည်ဥရောပသို့ခရီးထွက်ရာတွင်ရှောင်ကြဉ်သင့်သောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်.
လိုင်ယွန်မှ Avignon ရထားစျေးနှုန်း
4. ဥရောပတွင်သင်ရှောင်သင့်သည့်ခရီးသွားအမှားများ: ကြိုတင်လက်မှတ်တွေကိုမဝယ်ဘူး
ဥရောပကစျေးကြီးတယ်. သင်စျေးအသက်သာဆုံးနေရာများသို့ခရီးသွားနေလျှင်ပင်, ပြတိုက်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုလက်မှတ်တွေကိုသင်ကံကြမ္မာသေးငယ်တဲ့ကုန်ကျသွားကြသည်. လက်မှတ်များကိုကြိုတင်မဝယ်ခြင်းသည်ဥရောပ၌ရှောင်ရှားရမည့်အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်, နှစ်စဉ်ဥရောပသို့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်သန်းပေါင်းများစွာလာရောက်လည်ပတ်သည်, မင်းကိုအာမခံပေးပါလိမ့်မယ်.
ဒါကြောင့်, သင်သည်ဥရောပ၏အထင်ကရဆိုဒ်များအတွက်အလွန်ကောင်းသောအပေးအယူများကိုရှာဖွေနိုင်သည်, ဆွဲဆောင်မှု, နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ, သငျသညျကြိုတင်သုတေသနနှင့်စာအုပ်ဆိုင်လျှင်. တခါတရံသင်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းအားဖြင့်တကယ်ကောင်းတဲ့အပေးအယူရနိုင်တယ် အွန်လိုင်းလက်မှတ်တွေဝယ်ယူ, သင်၏ခရီးစဉ်တွင်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုသက်သာစေသည်. ဖြည့်စွက်ကာ, ဒါကြောင့်ဥရောပကိုသင်ပထမ ဦး ဆုံးခရီးစဉ်လျှင်, သငျသညျရှည်လျားသောစီတန်းများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရပါမည်. ဒါကြောင့်, အွန်လိုင်းမှခရီးသွားခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောလက်မှတ်များကို ၀ ယ်ယူခြင်းကသင့်ကိုမိုးရေထဲ၌ရပ်နေခြင်းမှကယ်တင်လိမ့်မည်, ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီနေ့ရက်များ, ထိုအဘို့အသငျသညျအရွက် အမြင် နှင့်ပျော်ပွဲစား.
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်သို့သွားခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်, ဘာသာစကားကိုပြောခြင်းသို့မဟုတ်မြို့တော်ပတ်လည်၌သင်သွားသောလမ်းကိုမရှာရ. သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်နှင့်နိုင်ငံခြားငွေကြေးကိုင်တွယ်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုနိုင်ပါတယ်. လေဆိပ်မှာပိုက်ဆံဖလှယ်နေစဉ်အလွန်အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်, ဒါဟာဥရောပမှာရှောင်ရှားရန်ခရီးသွားအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်.
သင်ရရှိမည့်အခကြေးငွေများ ငွေပေးချေနှင့်ငွေကြေးလဲလှယ် မင်းကုန်ကျလိမ့်မယ်, ထို့ကြောင့်အီးပေါ်တွင်သင်၏သုတေသနလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်xchange အချက်များ. လည်း, သင်အမြဲသင့်ရဲ့ဟိုတယ်ရဲ့ reception ည့်ခံထဲမှာမေးနိုင်ပါတယ်, သူတို့အကြံပြုဖို့ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည် ယုံကြည်စိတ်ချရသောပိုက်ဆံအချက်များ areaရိယာ၌. လေဆိပ်မှခရီးစဉ်အတွက်လုံလောက်သောဖလှယ်ရန်အကြံပြုပါသည်, နှင့်ပထမ ဦး ဆုံးဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်ဟုငွေပမာဏ 1-2 သင့်ခရီးစဉ်ရက်များ.
Le Havre ရထားစျေးနှုန်းမှ Rouen
6. Wrong Neighborhood တွင်တည်းခိုခြင်းစာအုပ်
တည်နေရာသည်ဖန်တီးရာတွင်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည် ပြီးပြည့်စုံသောအားလပ်ရက် ဥရောပမှာ. မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတခုအပေါ်မှာသင်၏သုတေသနလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး, ရပ်ကွက်ထဲ, ဒါမှမဟုတ်တည်းခိုဖို့ရွာ, ဥရောပမှာခရီးသွားတဲ့အခါရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အမှားတစ်ခုဖြစ်တယ်. သင်၏နေရာထိုင်ခင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်နေရာထိုင်ခင်းအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်သကဲ့သို့အရေးကြီးသည်. မြို့၏မှားယွင်းသောနေရာတွင်နေထိုင်ခြင်းသည်ခရီးသွားခြင်းအတွက်သင့်အတွက်ကုန်ကျနိုင်သည်, အသွားအလာ, စျေးနှုန်း, နှင့်လုံခြုံရေး.
7. ဥရောပတွင်သင်ရှောင်သင့်သည့်ခရီးသွားအမှားများ: သင်တွေ့မြင်သောပထမဆုံးစားသောက်ဆိုင်၌စားပါ
သငျသညျပုံမှန်ခရီးသွား are ည့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်သည်နေ့လည်စာစားရန်သို့မဟုတ်သင်၏လမ်းပေါ်တွင်ပထမဆုံးစားသောက်ဆိုင်အတွက်နာမည်ကြီးအစာရှောင်စားသောက်ဆိုင်များကိုသွားမည်. သို့သျောလညျး, သငျသညျအံ့သြဖွယ်စားသောက်ဆိုင်များအပေါ်ထွက်လက်လွတ်ပေလိမ့်မည်, သင့်ရဲ့အသက်ရှုခြင်းကိုပယ်ရှားလိမ့်မည်ဟုစိတ်ကူးဒေသခံဟင်းလျာများနှင့်ရှုထောင့်နှင့်အတူ.
မင်းခရီးကိုကြိုတင်သုတေသနပြုဖို့အချိန်အနည်းငယ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမမေ့နိုင်သောအချက်အပြုတ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုသို့သင်ဆက်ဆံပါလိမ့်မည်. အပြင်, သို့ အရသာအစားအစာကြိုးစားနေ, သငျသညျအနည်းငယ် Dime ကိုကယ်တင်နိုင်ဘူး, အစားန်းကျင်ပထမ ဦး ဆုံးစားသောက်ဆိုင်ထဲမှာ splurging ၏. ကော်ဖီကြီး, မုန့်ချို, ဒေသခံအစားအစာ, နှင့်ရယ်စရာနှုန်းထားများမှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုဟင်းလျာများ, ရုံထောင့်ပတ်လည်ရှိနိုင်ပါသည်.
လမ်းညွှန်စာအုပ်သည်ဥရောပသို့သွားရန်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်, နှင့်အထွေထွေခရီးသွားအစီအစဉ်ရှိခြင်းသည်. သို့သျောလညျး, သင်၏လမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကပ်ခြင်းသည်ဥရောပတွင်ရှောင်ရှားရန်အကြီးမားဆုံးခရီးသွားအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သန်းပေါင်းများစွာသောအခြားကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များနှင့်အတူတူပင်လည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်, နှင့်ခရီးသွားကဲ့သို့.
မြို့ပေါ်မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း အခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီး ဥရောပရှိအလှဆုံးမြို့ကြီးများကိုပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ဒေသခံစကားပြောအင်္ဂလိပ်လမ်းညွှန်ကမင်းကိုမြို့တစ်ဝိုက်ကိုခေါ်သွားမှာပါ. လူကြိုက်များပြီးကျော်ကြားသောဆိုဒ်များကိုပြသခြင်းအပြင်, မြို့လမ်းလျှောက် tour ည့်လမ်းညွှန်ကသင့်အားမြို့၏အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားသည့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုပြောပြလိမ့်မည်. ဤသည်တို့ပါဝင်သည် အစားအစာအကြံပြုချက်များ, ကြီးမြတ်အပေးအယူ, လျှို့ဝှက်အစက်အပြောက်, နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့လုံခြုံနေဖို့ဘယ်လို.
9. ဥရောပတွင်သင်ရှောင်သင့်သည့်ခရီးသွားအမှားများ: ဥရောပအတွက်ထုပ်ပိုးမ
နေသာ, မိုးရွာများသော, အေး, သို့မဟုတ်စိုစွတ်သော, ဥရောပရဲ့အထူးခြားဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်တာပါ4တစ်ရက်အတွက်ရာသီ. ဒါကြောင့်, ဥရောပရာသီဥတုအခြေအနေအတွက်အထူးသဖြင့်ထုပ်ပိုးခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုရှောင်ရှားရန်ခရီးသွားအမှားဖြစ်သည်.
တီရှပ်များ, မိုးနှင့်လေအကျီ, သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ဖိနပ်သည်သင်၏ဥရောပသို့သွားရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. အလွှာများကိုထုပ်ပိုးပြီးဝတ်ဆင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, ဤနည်းအားဖြင့်မည်သည့်ရာသီဥတုတွင်မဆိုသက်တောင့်သက်သာရှိလိမ့်မည်, နှင့်တစ်ခုလုံးကိုဗီရိုန်းကျင်သယ်ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.
ဥရောပမြို့ကြီးများရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများကြသည်, ဒါပေမယ့်လည်းအဘို့ မင်္ဂလာပါ, ခရီးသွား tr ည့်, နှင့်ခရီးသွား trick ည့်လှည့်ဖြားရန်အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များ. အကြားသင့်ရဲ့ခရီးသွားဘတ်ဂျက်ရေငုပ် မင်းရဲ့တစ်နေ့တာခရီး အိတ်, လုံခွုံသော, နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်သည်လုံခြုံစွာသွားလာရန်နှင့်ပျော်မွေ့ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်.
သင်၏လုံခြုံသောဘက်တွင်နေရန်နှင့်သင်၏ငွေနှင့်အကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, အချိန်တိုင်းနှင့်နေရာတိုင်း၌သင်၏တန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း, ဥရောပမှာသင်ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ခရီးသွားအမှားတစ်ခုဖြစ်တယ်.
ကောက်ချက်ချရန်, ဥရောပ၌ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အများအပြားအံ့သြစရာနေရာများရှိပါတယ်. သငျသညျအံ့သြဖွယ်တနင်္ဂနွေဖြုန်းသို့မဟုတ်ရှည်လျားသောယူရိုခရီးစဉ်စီစဉ်နိုင်ပါတယ်, ဖြစ်နိုင်ခြေအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်. ဒါပေမဲ့, သင်တစ် ဦး နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်သို့ခရီးသွားလာကြသောအခါ, ဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမြို့အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်. အတူတူပဲကျန်ရှိနေသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာခရီးသွားတိုင်းခရီးသွားတိုင်းအမှားပြုမိခြင်းဖြစ်သည်. ငါတို့ 10 ဥရောပ၌ရှောင်ကြဉ်ရန်ခရီးသွားအမှားတွေ, သင့်ကိုလုံခြုံအောင် ထား၍ သင်၏ခရီးစဉ်ကိုထူးခြားစေမည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏ရွေးချယ်ထားသောဥရောပသို့သင်၏အားလပ်ရက်ကိုရထားဖြင့်စီစဉ်ရန်ကူညီပေးပါမည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပတွင်ရှောင်ရှားသင့်သည့်ခရီးသွားအမှား ၁၀ ခု” ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်သင်၏ဆိုဒ်သို့ထည့်သွင်းချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/travel-mistakes-avoid-europe/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, နှင့် / pl သို့ / tr သို့ / / de နှင့်အခြားဘာသာစကားများကိုလဲပြောင်းနိုင်သည်.
#traveleurope Europetips ရထားခရီးသွား ခရီးသွားခြင်း traveltips
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလူဇင်ဘတ်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား